हाम्रो नेपाल मा : HAMRO NEPAL MA: अमेरिकामा साथीकी बुढी नाच्दा नेपालमा रमाइलो
अमेरिकामा साथीकी बुढी नाच्दा नेपालमा रमाइलो
अमेरिका मा बस्दै आएको साथीले बुढी नाचेको तस्बिर फेसबुक मा राखेछ. साथीकी बुढी झकिझकाउ भएर दंग पर्दै नाचेको देखेर मनमा लाग्यो: नेपालीहरुको आत्म सिद्धि वा सेल्फ अक्चुअलाइज़शन त अमेरिका पुगेपछि हुँदो रछ. गोराहरुको आत्म सिद्धि चाहि कसरि हुदो हो ?
Labels: Nepalis in United States of America
Aakar October 25, 2010 at 6:35 PM
फेसबुक को फोटो यता ल्याएर राख्दा, साथि ले नराम्रो पो मान्ने हो कि ?
HAWA October 26, 2010 at 8:47 AM
धन्यवाद आकार ब्रो, राम्रो कुरा सम्झाउनुभो.. तेसैले त हावा नाम राखेको ब्यक्तिगत टिप्पणी गर्न सजिलो होला भनेर.. फेरी यो चित्र चाँही मैले सार्वजनिक वेबसाईट बाट नै लिएको हुँ.. हेहे
सूर्य/सिकारु October 28, 2010 at 6:32 PM
धेरै पछी आइयो हावासंगै बहकिन । बुढी नाचेको देखेर रमाइलो मान्नै पर्यो नि होइन त ?
Rajesh Ghimire October 29, 2010 at 8:30 AM
tesari arkako photo rakhda Copyright le garo parla hai hawa ji....
Dhruba Panthi November 18, 2010 at 4:45 PM
हावा ब्रोकोतिर हावा खान आउन नपाएको पनि थुप्रै भएछ। ब्रोको आजभोलिको यो 'फेसबुके' स्टाइलको ब्लगिङ पनि घत पर्‍यो। जेहोस्, ब्लग पढ्न पाइरहुँ। अनि साँच्चै, गोराहरुको आत्मसिद्धि चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ, मलाई पनि खुल्दुली भयो भन्या!
ब्लग ब्लक गरेकोमा माकुने सरकारलाइ धन्यबाद
पित्रिसत्ता, नारिवाद र माकुने कि बुढी
कुइरेनी को बच्चो
प्रधानमन्त्रि माधव नेपाल ले सडकमा कुचो लाउदा
सुन्नुहोस् दशैँ किराँतहरुको चाड हो !
ओ मानिस कठैबरा तिम्रो जीवन